विप्लवलाई केपी ओलीको प्रश्न: खेदेको राजा कि तपाईंलाई नै ल्याएर राजा बनाउनु पर्ने हो ? (भिडियो) « Naya Page
विप्लवलाई केपी ओलीको प्रश्न: खेदेको राजा कि तपाईंलाई नै ल्याएर राजा बनाउनु पर्ने हो ? (भिडियो)
ललितपुर: लतिलपुरको लगनखेल बस पार्कमा बाम गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ । सभा स्थलबाट करिब ५ सय मिटरको दुरीमा रहेको नमुना मछिन्द्र माध्यामिक विद्यालय नजिकै बम विस्फोट भएको हो ।
ललितपुरको लगनखेलस्थित सभामा बोल्दै ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपातर्फ संकेत गर्दै निर्वाचन नभएर के हुनुपर्ने हो भन्दै प्रश्न गरे । ”निर्वाचन नभए के हुनुपर्ने हो ?’ ओलीले भने, ‘के अब खेदिएको राजालाई ल्याएर फेरि थपक्क राखिदिनुपर्ने हो रु कि त बम पड्काउनेलाई नै ल्याएर राजा बनाइदिने हो र?’
लगगनखेलमा ओलीले यस्तो प्रश्न गरिरहँदा सभास्थल छेउमा बम बिस्फोटको घटना भएको थियो । सोही कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेसको गठबन्धन लोकतान्त्रिक गठबन्धन नभएको बताए । कयौंपटक सरकारको नेतृत्व गर्दा कांग्रेसले देशमा विनाश गरेको भन्दै अब वामपन्थीको पालो आएको बताए ।
दिउँसो गठबन्धनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सम्बोधन शुरु गर्ना साथ विस्फोटको ठूलो आवाज आएको थियो ।